1 Samoela 21 - Ny Baiboly
1 Samoela toko 21
Ny nandosiran'i Davida tany Nobe, amin'i Akimeleka, sy tany Geta amin'i Akisa mpanjaka.
1Koa Davida moa nitsangana dia lasa nandeha, fa Jonatasy kosa niditra nankany an-tanàna.
2Lasa nankany Nobe amin'i Akimeleka mpisorona Davida ka taitra mafy Akimeleka nitsena an'i Davida nanao taminy hoe: Nahoana ity hianao no honjohonjonao irery, fa tsy misy miaraka aminao? 3Dia hoy ny navalin'i Davida tamin'i Akimeleka mpisorona: Nomen'ny mpanjaka didy aho, nataony hoe; Aoka tsy hisy olona hahalala ny raharaha anirahako anao, sy nanomezako didy anao. Ka nomeko fotoana any ananona any ny olona momba ahy. 4Ary amin'izao kosa inona no vonona eo am-pelatànanao izao? Omeo mofo dimy aho eto an-tànako na izay sendra hita. 5Ary hoy ity mpisorona namaly an'i Davida hoe: Tsy misy mofo fihinana eto amiko, mofo voahasina no misy; tsy maintsy ho nifady vehivavy ahay anefa ny olona. 6Ka hoy Davida namaly ny mpisorona nanao hoe: Hatramin'ny nandehanako hateloana izay no efa nifady vehivavy izahay, sady masina koa ny kapaoky ny olona miaraka amiko, ka na tsy masina aza ny dia, ny amin'ny momba ny kapaoka kosa dia voahasina. 7Dia nomen'ny mpisorona mofo voahasina izy, fa tsy nisy mofo hafa teo afa-tsy ny mofo aseho, izay efa nesorina teo anoloan'ny Tompo mba hosoloana ny mofo mafana amin'ny fotoana fanesorana azy. 8Tao indrindra ny lehilahy anankiray amin'ny mpanompon'i Saola tamin'izay andro izay, fa voahazona teo anatrehan'ny Tompo; Doega Edomita no anarany, ary lehiben'ny mpiandry ny ondrin'i Saola izy.
9Ary hoy Davida tamin'i Akimeleka: Tsy misy lefina na sabatra va ato aminao? Fa tsy naharay ny sabatro na ny fiadiana ho entiko akory aho fa maika ny raharaha nandidian'ny mpanjaka ahy. 10Dia hoy ny navalin'ny mpisorona: Ny sabatr'i Goliata, ilay Filistina, izay novonoinao tao amin'ny lohasahan'ny Terebinta no ao, indro mifono ny lamba kapaoty ao ivohon'ny efoda ao izy. Ka raha tianao hoentina iny, dia ento, fa tsy misy afa-tsy iny eto. Ary hoy Davida: Tsy misy hoatra an'iny ka omeo ahy iny.
11Nitsangana Davida ary androtr'izay ihany dia nandositra lavitra an'i Saola, ka tany amin'i Akisa mpanjakan'i Geta no nalehany. 12Ary hoy ny mpanompon'i Akisa taminy: Tsy io va no Davida, mpanjakan'ny tany? Tsy io va no nanaovana hira arahim-pandihizana hoe:
Ary alinalina no matin'i Davida? 13Nieritreritra ny amin'izany teny izany Davida, ka raiki-tahotra mafy an'i Akisa mpanjakan'i Geta. 14Dia nody adala teo anatrehan'izy ireo sy niseho ho very saina teo am-pelatànany izy: noveleziny, nataony langoraona ny lela vavahady; ary navelany hitsororoka amin'ny somony ny ranon'iviny. 15Ka hoy Akisa tamin'ny mpanompony: Hitanareo fa adala io lehilahy io, ka ahoana no nitondranareo azy aty amiko? 16Tsy ampy olona adala ato amiko angaha no itondranareo an'io, hanondrana eto anatrehako? Io ve dia tokony hiditra izay tranoko akory? >